Mabhenefiti ekushandisa Big Data muDzidzo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Zvakanakira kushandisa Big Data mu Dzidzo
Dhiyabhorosi chete haisi chinhu asi iyo data yakadzika yakaongororwa inogona kuva pfuma nenzira yeruzivo rwakavimbika, iyo inogona kuita mutsauko mumunda wezvidzidzo. Kunyange ichiri kutora danho rayo rekutanga, kune nyanzvi dzakawanda dzinofanotaura kuti data huru ichareva shanduko chaiyo mukati dzidzo, asi vanobatana sei? Zvimwe unofanira kutanga wapindura mimwe mibvunzo.
Chii big data? Iri iboka revatekinoroji uye maitiro anoita kuti kuchengetedza, kurapwa uye kuongororwa kwehuwandu hwedata hwakagadzirwa pasirese kugoneka. Tiri kutaura nezve 1,700 trillion byte paminiti.
Ndiani uyu? Uchishandisa analogi yenyaya yakakurumbira yeLittle Red Riding Hood neWolf, inoshanda "kukuona iwe zviri nani ...", nekuti muchokwadi, chii big data inobvumira: kuonana, mumwe Kunzwisisana zviri nani pakuteerera nekuongorora mumwe.
Sei kushanda? Uchishandisa makomputa ane simba anoshandura mamirioni e data nekukurumidza uye zvakanaka panguva imwe chete. Izvi zvinobvumira kuwirirana pakati pekutsvaga mapatani nemaitiro anoshanda kugadzira fungidziro yakavimbika yedata uye kuita sarudzo.
Uye izvi zvinoshanda sei kune dzidzo? Maererano naDan Kern, Software mainjiniya nyanzvi mune yakakura data, in dzidzo, zvese izvi zvitatu zvinoshandura kuita mikana mikuru: mukana wekuita wega dzidzo inowanikwa kubva muruzivo rwakakwana rwemwana wega wega; pane mukana wekuwana mhinduro munguva chaiyo uye kuita zvinoenderana uye pakupedzisira, pane mukana wekugovana ruzivo. Uye haasiye ega anofunga nezvazvo.
Nguva zhinji tinosanganisa e-Learning nemhando yedaro dzidzo iyo inongowanikwa kuvadzidzi veyunivhesiti. Nekudaro, sezvatakambotaura mune ino positi nezve maitiro ekudzidziswa kwepamhepo kwemakore anouya, nyanzvi dzinofanotaura kuti kushandisa Big Data mune dzidzo ichave shanduko chaiyo.
Muchikamu chino, tichatsanangura kuti zvinokwanisika sei kugadzira itsva kudzidza sisitimu yakavakirwa pakuongorora kwehuwandu hwe data yakatorwa zvakananga kubva kuvadzidzi kana, nemamwe mazwi, nei Big Data ichave iripo muzvikoro zvese zveramangwana.
Kuedza neBig Data muzvikoro
Mapiyona ekuedza ne Big Data in dzidzo vari AltSchool, kongiresi yezvikoro zvakatsaurirwa kukuvandudza. Kunyanya, zvikoro zvidiki zvina muSan Francisco zviri kuita kuyedza kugadzirisa data. Nechinangwa chekudzidza kuti tekinoroji inogona kubatsira sei vadzidzisi kuvandudza mudzidzi kudzidza.
Unowana sei iyo data? Munzira dzakasiyana-siyana. Kutanga, vadzidzi pavanosvika kuchikoro vanofanirwa "kutarisa-mukati" paApp inodzora kupinda. Uye zvakare, ivo vanotsaurira chikamu chezuva rekushanda vakazvimiririra, vachishandisa iPad uye zviitiko zvekutamba. Izvi zvakasarudzwa nevadzidzisi zvinoenderana nezvinangwa zvavo.
Panguva iyoyo, iyo data yekufambira mberi kwemudzidzi inochengetwa kuitira kuti mudzidzisi azviongorore gare gare. Pakupedzisira, makirasi akanyorwa pavhidhiyo. Nenzira iyi, vadzidzisi vanogona kurangarira nguva dzakakosha pakubata bhatani, sezvataizoita ne SmartTV.
Pfungwa ndeyekuti data rese kubva kuzvikoro izvi rinounganidzwa mune yakangwara uye yepakati system. Izvi zvinobvumidza vadzidzisi kugadzira makirasi anoshanda uye akasarudzika.
Nepo zvikoro zvakawanda zvisina hunyanzvi hutsva hwevadzidzi vese (senge makomputa kana zvimwe nharembozha); AltSchool iri kuvandudza makirasi anotendera vadzidzi vese kuti vave nekombuta yega uye zvimwe zvigadzirwa zvemadhijitari.
Chinhu chitsva ndechekuti matekinoroji aya ari kutora huwandu hukuru hwe data. Zvakakwana kuti utarise maitiro ane musoro uye uve neruzivo rwekuti vadzidzi vanodzidza sei. Muchidimbu, data rese iri rinoratidza kuti sei kudzidza process iripo uye kuti tekinoroji iri kuita sei yedu dzidzo zviri nani.
Nei uchishandisa Big Data mu Dzidzo?
Big Data inotungamira kune dzidziso yakasarudzika yakanangana nekuvandudza nguva dzose kwe kudzidza nzira. Parizvino, AltShcools inoronga kuvhura zvimwe zvikoro zvina uye kutengesa mukana kune zvimwe zvikoro.
Big Data in dzidzo hachisi chiitiko chezvikoro uye zvikoro chete, asi chinoitikawo munzvimbo dzepamusoro dzidzo. Mumakore manomwe apfuura kubva kosi yekutanga yeMassive yakavhurika pamhepo yakatangwa nemapurofesa maviri ekuCanada, maMOOCs ave tsime rehuwandu hwedata pamafambiro evadzidzi.
Vashoma nhamba yevadzidzi vanopedzisira vapedza MOOC. Chokwadi ndechekuti data ravo rinobatsira vadzidzisi kugadzira mhando nyowani dzekudzidzisa dzinoti dzinoshanda zvakanyanya. Isu tinotaura semuenzaniso wezvirongwa zvinosanganisa online dzidzo nekudzidzisa.
Dzidzo - zvirinani pamhepo kana mu-munhu?
Zvinoenderana neMIT Technology Ongororo, online dzidzo yakabvumikisa kuva mune zvimwe zviitiko inobudirira zvikuru kupfuura makirasi egamuchidzanwa akatarisana. Arizona State University, semuenzaniso, inosanganisa chiso nechiso uye online makirasi. Inopa mavhidhiyo emakirasi uye inobatanidza chishandiso chepamhepo chinoongorora kuti chii chinodiwa nevadzidzi nenzira yemunhu. Kutenda kune mishumo yekufambira mberi kwevadzidzi, data panguva yekuzvitsaurira uye kubudirira kwezvirongwa zvekudzidzisa, nhamba yevadzidzi vanozopasa iri pa75%.
Pamhepo kosi data inopawo nhanho nyowani yemhinduro kune vadzidzisi. Mudzidzisi anogona kuongorora kana vhidhiyo yakabudirira nekuona panguva ipi vadzidzi varega kuitarisa. Mhinduro yacho inotorwawo kubva pabvunzo. Kana chete makumi maviri muzana evadzidzi vanoita bvunzo vaine mubvunzo wakanyatsopindurwa, vadzidzisi vanogona kuongorora kuti icho chikamu chekirasi chinotsanangurwa sei muvhidhiyo kana kuti mubvunzo wakabvunzwa sei kuti vaone chakakanganisika.
Kana iwe uchifarira online kudzidziswa uye Big Data, tinokurudzira kuti utarise Master in Business Intelligence uye Data Science uye ona kuti sei maitiro avo achibvumira vadzidzi kuti vape zvavanogona. Uye kana chinyorwa ichi chikaita sechinonakidza kwauri, usakanganwa kugovera!
7 Nzira dzekushandisa Artificial Intelligence muHR
AI ichave yakakonzera kwakakosha pane kukosha kweHR, kunyanya munzvimbo dzekukura kwemushandi wako wepamoyo kana kutora tarenda rakanaka
11 Nyanzvi nezveRamangwana reI ICO & Impact yayo paMari Misika
Chekutanga Mari Kupa - iyo blockchain hama yeIP yakachinja mari yekutsvaga mari. Ziva nezveramangwana reICO uye zvazvinoreva kutanga uye mabhizinesi